Mambo Seke Vochema neKuparara kweTsika Munyika Yose
Mitambo yeKumusha Fringe Festival iri kuitwa kuDema, kwaSeke mukupera kwesvondo.
Mambo Seke, VaStanley Chimanikire, vanoti Zimbabwe haisisina tsika nehunhu zvinotarisirwa kunyika yakaita seZimbabwe.
Vachitaura vari pamuzinda wavo kwaSeke mazuva mashoma mitambo yemazuva maviri yeKumusha Fringe Festival isati yatanga kuDema Growth Point, Mambo Seke vati vanhu havachaziva tsika dzavo, izvo zvakapa hurumende kuti ipe madzishe basa rekudzidzisa veruzhinji pamusoro petsika dzavo.
Mambo Seke, avo vane nzvimbo iri kuitirwa Kumusha Fringe Festival, vakurudzirawo vanoita mitambo yechinyakare yakaita seJerusarema, kuti vazive zvinoreva mitambo iyi sezvo mimwe yacho iri mitambo inofanirwa kuonekwa nevanhu vakuru chete, kwete zviri kuitwa mazuva ano zvokuti vana vadiki vari kusiyiwa vachiona mitambo yakadai.
Vatiwo veruzhinji muZimbabwe havacharemekedzi mabasa emadzimambo, izvo vati zvinovaodza moyo zvikuru.
Vari kuronga mitambo iyi, uye vari mutambiwo pachavo, Sabhuku Eddie Kandava, vati vakaronga mutambo weKumusha Fringe Festival mushure mekuona kuti vagari vekumaruwa vari kushaya zvinovavaraidza, uye kusimudzira mabasa avanoita akaita sekuimba nekuveza nezvimwe zvakadaro.
VaKandava vati mutambo weKumusha Fringe Festival, uyo uri kutanga neChishanu uchipera neMugovera, uchaitwa gore rega rega kwaSeke, uye shuviro yavo ndeyekubatana nemamwe matunhu kuti aitewo mitambo iyi senzira yekusimudzira mabasa evatambi vari mumatunhu gumi ari muZimbabwe.